ထိုင်း ဆန္ဒပြမှုတွေကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ တားဆီးမှုတွေလုပ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ထိုင်း ဆန္ဒပြမှုတွေကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ တားဆီးမှုတွေလုပ်
BANGKOK, THAILAND - MAY 23: Thai soldiers patrol near government buildings on May 23, 2014 in Bangkok, Thailand. The Army chief announced in an address to the nation that the armed forces were seizing power inanon-violent coup. Thailand has seen months of political unrest and violence which has claimed at least 28 lives. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)
ထိုင်း ဆန္ဒပြမှုတွေကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ တားဆီးမှုတွေလုပ်
ထိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ရာချီ ဟာ ဆန္ဒပြဖို့ စီစဉ်ထားတာတွေကို ပိတ်ဆို့တာဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ကနေ နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း Khon Kaen အ ထိ စီစဉ်ထားတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရ ကအုပ်ချုပ်နေမှုကို နှစ်သက်မှုမရှိတာကြောင့် အစိုးရဆန်ကျင့်ရေးဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတည်းက စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထိုင်း စစ် အစိုးရ ဟာ အများပြားသူတွေ လုစုလူဝေးဖြစ်မှာကို ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ ဆန္ဒပြမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ မြောက်ပိုင်း Rangsit, ရှိ တမ်မာဆက် တက္ကသိုလ်ဆီ ဆန္ဒပြသူ ၂၀၀ ဦးစုရုံးရောက်ရှိလာပြီး ဆန္ဒပြခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြမှုကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ တက္ကသိုလ် အတွင်းမှထွက်လို့မရအောင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀၀ ဦး က တက္ကသိုလ်အဓိကတံခါးမကြီးကို ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။
ထိုငျး ဆန်ဒပွမှုတှကေို ထိုငျးရဲတပျဖှဲ့ တားဆီးမှုတှလေုပျ
ထိုငျး ရဲတပျဖှဲ့ရာခြီ ဟာ ဆန်ဒပွဖို့ စီစဉျထားတာတှကေို ပိတျဆို့တာဆီးမှုတှေ ပွုလုပျလိုကျပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျမွို့ကနေ နိုငျငံအရှမွေ့ောကျပိုငျး Khon Kaen အ ထိ စီစဉျထားတဲ့ ဆန်ဒပွပှဲတှကေို ပိတျဆို့မှုတှေ ပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ထိုငျးနိုငျငံမှာ စဈအစိုးရ ကအုပျခြုပျနမှေုကို နှဈသကျမှုမရှိတာကွောငျ့ အစိုးရဆနျကငျြ့ရေးဆန်ဒပွပှဲပွုလုပျသှားမှာလညျးဖွဈပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ၂၀၁၄ ခုနှဈနောကျပိုငျးတညျးက စဈတပျက အုပျခြုပျနခေဲ့တာဖွဈပွီး ထိုငျး စဈ အစိုးရ ဟာ အမြားပွားသူတှေ လုစုလူဝေးဖွဈမှာကို ပိတျပငျတားဆီးမှုတှပွေုလုပျပွီးနောကျပိုငျးဖွဈလာတဲ့ ဆန်ဒပွမှုလညျးဖွဈပါတယျ။
ဘနျကောကျမွို့ မွောကျပိုငျး Rangsit, ရှိ တမျမာဆကျ တက်ကသိုလျဆီ ဆန်ဒပွသူ ၂၀ဝ ဦးစုရုံးရောကျရှိလာပွီး ဆန်ဒပွခှငျ့ပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဆန်ဒပွမှုကိုတားဆီးနိုငျဖို့ တက်ကသိုလျ အတှငျးမှထှကျလို့မရအောငျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ၂၀ဝ ဦး က တက်ကသိုလျအဓိကတံခါးမကွီးကို ပိတျဆို့ထားပါတယျ။
Previous article၇၁ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အမျိုးသားရေးဦးတည်ချက် ၄ ရပ် NLD အစိုးရ ချမှတ်
Next articleထိုင်းနိုင်ငံက ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည်နေရာချထားဖို့ ကန်ဒေါ်လာ ၂ သိန်းခွဲလှူဒါန်း